January 2017 - Xalayaa
Ilmoo Kee narratti gattee deemte Akkam naaf jirta? Jireenyi badhaadha? Rabbiif galata guddaa haa ta'uti nagaan koo jira. Seena jaalala miyaawa keessa waliin dabarsine hardha maal dhageesse yaadan deddeebite garaa koo nabooresituus obseeto jiraachurra kan hafee anii nagaa kooti. Hawaa jaalala dhugaa...